आईप्याड र आईफोनका लागि २१ चालहरू जुन तपाईंलाई शायद थाँहा थिएन आईफोन समाचार
धेरै वर्ष अघि मैले मेरो पहिलो आईफोन खरीद गरें, ब्ल्याकबेरी प्लेटफर्म प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले, मैले मेरो पहिलो आईप्याड मिनी खरीदें, जुन अब मेरो छोराले प्रयोग गरिरहेको छ; यो जान्नको लागि वर्षौं लाग्यो र विभिन्न युक्तिहरू पत्ता लगाउन जुन तपाईं आफ्नो iOS उपकरणहरूसँग गर्न सक्नुहुन्छ, आईप्याड र आईफोनका लागि ट्रिकहरू जुन अन्य प्लेटफर्महरूसँग भिन्नता राख्छन्। यस लेखमा हामी तपाइँलाई केहि तरिकाहरू देखाउनेछौं, जुन तपाइँलाई थाहा थिएन।
1 विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा युक्तिहरू
1.1 आईफोनमा स्वचालित रूपमा फोन विस्तार डायल गर्नुहोस्
1.2 नि: शुल्क GPS (अफलाइन) को रूपमा गुगल नक्सा प्रयोग गर्नुहोस्।
1.3 टाइमरको साथ संगीत प्लेयर रोक्नुहोस्
2 सुझावहरू प्रयोग गर्नुहोस्
2.1 स strength्केत शक्ति संख्याको साथ देखाइएको छ
2.2 मल्टिटास्किंग बार बन्द गर्नुहोस्
2.3 फोटोहरू लिनुहोस् र हेडफोनको मद्दतले भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्
2.4 सफारीमा हालसालै बन्द गरिएका ट्याबहरू फेरि खोल्नुहोस्
2.5 स्पटलाइट खोज
2.6 क्याल्कुलेटरमा प्रविष्ट गरिएको अन्तिम अंक खाली गर्नुहोस्
2.7 वैज्ञानिक क्यालकुलेटर
2.8 हेडफोनका लागि अन्य प्रकार्य
2.9 एक क्लिकको साथ शीर्षमा स्क्रोल गर्नुहोस्
3 सेटिंग्स सुझावहरू
3.1 पहुँच सुविधा
3.2 तपाईंको उपकरण दुई पटक छिटो चार्ज गर्न हवाइजहाज मोड
3.3 बटन सहयोग
4 कीबोर्ड तरिकाहरू
4.2 स्थायी ठूला अक्षरहरू
4.3 किबोर्डलाई डुअल स्क्रिन मोड (थम्ब) मा परिवर्तन गर्नुहोस्
4.4 डिग्री आइकन कसरी लेख्ने º
4.5 लेखिएको कुरालाई अन्डू गर्न हल्लाउनुहोस्
5 क्यामेरा चाल
5.1 AE / AF लक
विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा युक्तिहरू
आईफोनमा स्वचालित रूपमा फोन विस्तार डायल गर्नुहोस्
आईफोनको पज डायलिंग सुविधाले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ तपाईंको उपकरणलाई सूचित गर्नुहोस् एक नम्बर कल गरेपछि पज गर्न र अर्को नम्बर डायल गर्नुहोस्। त्यसो भए, मानिलिनुहोस् तपाईं कम्पनी "X" मा साथीलाई कल गर्दै हुनुहुन्छ, कम्पनीको फोन नम्बर १२123456 छ र तपाईंको साथीको विस्तार 789 123456 is छ। यो विकल्पको साथ, आईफोनले १२ 789 पहिले डायल गर्नेछ, कल जवाफ नभएसम्म पज गर्नुहोस्, र त्यसपछि यो स्वचालित रूपमा dial XNUMX dial डायल हुनेछ। केवल यो सुविधा प्रयोग गर्नका लागि तारांकन "*" बटन थिच्नुहोस् र तपाईंले पहिलो नम्बर प्रविष्ट गरेपछि होल्ड गर्नुहोस्, त्यसैले एक अल्पविराम प्रदर्शित हुनेछ। पज पछि डायल गर्न दोस्रो नम्बर थप्नुहोस्।
नि: शुल्क GPS (अफलाइन) को रूपमा गुगल नक्सा प्रयोग गर्नुहोस्।
विदेश यात्रा गर्दा, तपाईं Google नक्सा एक नि: शुल्क GPS को रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय डाटा योजनाको आवश्यकता बिना नै। तपाई अफलाईन हुनु भन्दा पहिले तपाईको इन्टरनेट नभएको क्षेत्र देखाउनुहोस्, त्यसपछि नक्सा अनुप्रयोगमा तपाईले प्रयोग गर्न चाहानु भएको क्षेत्रको नक्शालाई जुम गर्नुहोस्, र खोजी बाकसमा "ठीक नक्शा" टाइप गर्नुहोस्। यो डाटा उपलब्ध हुने छ जब तपाईंसँग डाटा कनेक्टिभिटी छैन।
टाइमरको साथ संगीत प्लेयर रोक्नुहोस्
तपाईं सक्नुहुन्छ निश्चित अवधि पछि संगीत प्लेब्याक रोक्नुहोस्। यो विशेष गरी उपयोगी छ यदि तपाईं संगीत सुन्न सुत्न चाहानुहुन्छ, तर प्लेब्याक रोक्नको लागि उठ्न चाहनुहुन्न। तपाइँ घडीमा जानुपर्दछ, त्यसपछि टाइमर छनौट गर्नुहोस् र अवधि समायोजित गर्नुहोस्। विकल्प चयन गर्नुहोस् "प्लेब्याक रोक्नुहोस्"ताकि जब टाइमरको म्याद सकिन्छ, प्लेब्याक रोकिनेछ।
सुझावहरू प्रयोग गर्नुहोस्
स strength्केत शक्ति संख्याको साथ देखाइएको छ
मार्कर * 3001 # १२12345 # # * र त्यसपछि कल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
कल बटन ट्याप गरेपछि, तपाई उपकरणको फिल्ड टेस्ट देख्नुहुनेछ। तपाईंसँग अब सिग्नल बारको सट्टा डेसिबल (dBm) सating्केत गर्ने एक नकारात्मक संख्या हुनेछ।
मल्टिटास्किंग बार बन्द गर्नुहोस्
मल्टिटास्कि bar बारमा अनुप्रयोगहरू बन्द गर्दा (गृह बटन डबल क्लिक गरेपछि), तपाईं सक्नुहुनेछ एकै समयमा तीन अनुप्रयोगहरू बन्द गर्नुहोस्। अनुप्रयोगहरू बन्द गर्न तपाईंले केवल तीन औंलाहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ।
फोटोहरू लिनुहोस् र हेडफोनको मद्दतले भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्
तपाईंको हेडफोनको रिमोट कन्ट्रोलमा भोल्यूम + बटन क्लिक गर्नुहोस् फोटो खिच्न वा भिडियो रेकर्ड गर्न क्यामेरा अनुप्रयोग भित्र एप्पलसँग मिल्दो, उत्तम सुझाव तपाईलाई उत्तम सेल्फी लिनको लागि।
सफारीमा हालसालै बन्द गरिएका ट्याबहरू फेरि खोल्नुहोस्
तपाईंको उपकरणमा, कहिले नयाँ ट्याबहरू खोल्नको लागि + बटन होल्ड गर्नुहोस् सफारीबाट तपाईले हालसालै बन्द गरिएका ट्याबहरूको सूची पाउनुहुनेछ।
स्पटलाइट खोजमा टाइप गर्दा, तपाईं सक्नुहुन्छ लगभग कुनै पनि जानकारी खोल्नुहोस् र पहुँच गर्नुहोस् त्यो फोनमा भण्डार गरिएको छ, तपाईंको सम्पर्कहरू (नाम वा नम्बर द्वारा खोजी गर्न सकिन्छ), अनुप्रयोगहरू, सन्देशहरू, क्यालेन्डर घटनाहरू, गीतहरू, भिडियोहरू र अधिक बढि (यदि कसैले तपाईंलाई खोजिरहेको कुरा फेला पारेमा, उपकरणले खोजी गर्नेछ। इन्टरनेट) यो तपाइँको आवश्यकताहरु मा अनुकूलित गर्न सकिन्छ, जानुहोस् सेटिंग्स> सामान्य> स्पटलाइट खोज। तपाईं सिधा स्पटलाइट खोज प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंलाई कल गर्नुपर्दछ, सन्देश पठाउनुहोस् (सम्पर्क सूचीमा जानुको सट्टा) सयौं अनुप्रयोगहरू मध्ये एक अनुप्रयोग भेटिएन, वा गीत फेला पार्न (तपाईं शीर्षक, कलाकार द्वारा खोजी गर्न सक्नुहुनेछ)। वा एल्बम) को सट्टा, सबै प्लेलिस्टहरू मार्फत स्क्रोलिंगको सट्टा।
क्याल्कुलेटरमा प्रविष्ट गरिएको अन्तिम अंक खाली गर्नुहोस्
यदि तपाईं अन्तिम अंक मेट्न चाहनुहुन्छ भने क्याल्कुलेटरमा तपाईंले टाइप गर्नुभयो तपाईंको औंला क्यालकुलेटर स्क्रिनमा बायाँबाट दायाँ स्लाइड गर्नुहोस् वा यसको विपरीत।
तपाईंको उपकरण अन-स्क्रिन क्यालकुलेटरको साथ घुमाउनुहोस् र यो एक वैज्ञानिक क्यालकुलेटर बन्छ।
हेडफोनका लागि अन्य प्रकार्य
तपाईंको हेडफोनको रिमोट कन्ट्रोलको साथ, संगीत सुन्ने बित्तिकै तपाईं प्लेयरलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक रोक्न वा प्ले गर्न तपाईंको हेडफोनमा प्ले / पज बटन थिच्नुहोस्, अर्को गीतमा जानको लागि दुई पटक, वा तीन पटक एउटा गीत फिर्ता जान।
एक क्लिकको साथ शीर्षमा स्क्रोल गर्नुहोस्
जब तपाईं पृष्ठ तल तल हेर्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि अनुप्रयोगको शीर्ष पट्टीमा क्लिक गर्नुहोस् र यो तुरुन्तै शीर्ष मा फिर्ता प्राप्त हुनेछ।
जब बच्चा तपाइँको आईफोन वा आईप्याडसँग खेल्न चाहन्छ, तपाइँले मार्गनिर्देशित पहुँच सुविधा सक्रिय गर्नु आवश्यक पर्दछ। यस सुविधाले ती साना औंलाहरूलाई सीमित राख्छ केवल तोकिएको स्थानमा र अनुप्रयोग बन्द नगरिकन ट्याप गर्नुहोस्.
जाऊ त्यहाँ सेटिंग्स> सामान्य> पहुँच> निर्देशित पहुँच र यसलाई सक्षम गर्नुहोस्, यस तरिकाले तपाईं यसलाई कन्फिगर गर्न सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको उपकरण दुई पटक छिटो चार्ज गर्न हवाइजहाज मोड
यदि तपाईंले फोन राख्नुभयो भने हवाइजहाज मोड, यो दुई पटक छिटो चार्ज हुनेछ। प्रयास गर्नुहोस् जब तपाईं चार्ज गर्ने समयमा छोटो हुनुहुन्छ, यो वास्तवमै समय बचतकर्ता हो।
यदि तपाईंसँग एउटा भाँचिएको गृह बटन छ वा स्क्रिन छुने समस्या भइरहेको छ भने, यो विकल्प सक्षम गर्नुहोस्। एकचोटि तपाइँ योबाट सक्रिय गर्नुहोस् पहुँच सेटिंग्स, तपाईं स्क्रिनमा एक ठूलो सेतो डट देख्नुहुनेछ जहाँबाट तपाईं आफ्नो उपकरणको बिभिन्न प्रकार्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
को कुञ्जीपाटी सर्टकटहरूले तपाईंलाई स्थायी सर्टकटहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ जटिल शब्दहरूमा जुन तपाई धेरै लेख्नुहुन्छ। तपाईं जानु पर्छ सेटिंग्स> सामान्य> कीबोर्ड> पाठ प्रतिस्थापन। यो निम्न प्रकारका सर्टकटहरूको लागि राम्रो छ:
गाह्रो वा लामा शब्दहरू।
अनौंठो प्रतीकहरू जस्तै: ← →, ♥, आदि।
सडकहरू र ठाउँहरू जुन तपाईंले सँधै सन्देशहरू वा ईमेलहरूमा उल्लेख गर्नुहुन्छ।
शब्दहरू अक्सर गलत हिज्जे गरिएको छ।
स्थायी ठूला अक्षरहरू
कहिलेकाँही अक्षरहरू वा संक्षेप मात्र ठूला अक्षरहरूमा लेख्न आवश्यक हुन्छ। तपाईंले गर्नु पर्छ क्याप्स लक परिवर्तन गर्न द्रुत डबल ट्याप गर्नुहोस् स्थायी रूपमा।
किबोर्डलाई डुअल स्क्रिन मोड (थम्ब) मा परिवर्तन गर्नुहोस्
आईप्याडमा, तपाईले बढि आरामसँग लेख्न सक्नुहुन्छ तपाइँको किबोर्डलाई डुअल स्क्रिन मोड (थम्ब) मा स्विच गर्नुहोस्। तपाईलाई चाहिने कुरा सरल मात्र हो किबोर्डमा दुई औंलाहरू स्लाइड गर्नुहोस् र किबोर्ड दुईमा विभाजित हुनेछ.
डिग्री आइकन कसरी लेख्ने º
यदि विषय मौसम वा रसायन विज्ञान सम्बन्धित छ भने, तपाईंले डिग्री आइकन use प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। धेरै सेकेन्डको लागि नम्बर शून्य थिच्नुहोस् र समाउनुहोस्, र ग्रेड आइकन माथिको देखाईनेछ, त्यसपछि तपाईंलाई आवश्यक छनौट गर्नुहोस्।
लेखिएको कुरालाई अन्डू गर्न हल्लाउनुहोस्
कुञ्जीपाटीमा सन्देश टाइप गर्दा कुनै समयमा तपाइँले चाहानु सक्नुहुन्छ सबै शब्दहरू हटाउनुहोस्, यसका लागि तपाईंले अवश्य उपकरण चलाउनुहोस् र अन्डु थिच्नुहोस्यसले एकैचोटि सम्पूर्ण सन्देश मेटाउनेछ।
AE / AF लक
AE / AF लक छ फोकस र क्यामेरा संग एक्सपोजर लक आईप्याड वा आईफोन, यो उपयोगी छ जब तपाईं प्रकाश वा गाह्रो अवस्थामा गहिराइको साथ फोटो लिन चाहानुहुन्छ। "AE / AF लक" देखा पर्दछ, कहिले स्क्रीन केहि सेकेन्डको लागि होल्ड गरिएको छ। यो प्रकार्य निष्क्रिय गर्न, स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » २१ आईप्याड र आईफोन ट्रिक्सहरू तपाईंलाई सम्भवतः थाहा छैन